The Witness (2019) – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
IMDB: 6.4/10 274 votes
Daichi Watanabe, Jun Kunimura, Kodai Asaka, Koji Okura, Koya Matsudai, Mahiro Takasugi, Miyuki Matsuda, Riho Yoshioka, Shuntarô Yanagi, Yoshi Sakou
ဂပြနျကားကောငျးကောငျးကွညျ့ခငျြသူတှအေတှကျ imdb 6.4 ရထားတဲ့ ဂပြနျ Crime ဇာတျကားကောငျးလေးတငျဆကျပေးလိုကျပါတယျ။ မတျောတဆတဈခုမှာ မကျြလုံးကနျးသှားတဲ့ ကောငျမလေးတဈယောကျ ရဲဖွဈဖို့အကွောငျးကံဖနျလာတဲ့ အခါ မမွငျပမေဲ့ အကွားတဈခုက လူသတျသမားကို အာရုံခံနိုငျမလား ? ဒါမှမဟုတျ လူသတျသမားကပဲသူ့ကိုအနိုငျယူတိုကျခိုကျသှားမလားဆိုတာ ဂပြနျဇာတျကားတို့ထုံးစံအတုငျး သဲထိတျရငျဖိုကွညျ့ရမှာဖွဈပါတယျ
ဒီဇာတျကားကို ဘာသာပွနျပေးသူကတော့ Myat Eaindray Khaing ဖွဈပါတယျ
ဂျပန်ကားကောင်းကောင်းကြည့်ချင်သူတွေအတွက် imdb 6.4 ရထားတဲ့ ဂျပန် Crime ဇာတ်ကားကောင်းလေးတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ မတော်တဆတစ်ခုမှာ မျက်လုံးကန်းသွားတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက် ရဲဖြစ်ဖို့အကြောင်းကံဖန်လာတဲ့ အခါ မမြင်ပေမဲ့ အကြားတစ်ခုက လူသတ်သမားကို အာရုံခံနိုင်မလား ? ဒါမှမဟုတ် လူသတ်သမားကပဲသူ့ကိုအနိုင်ယူတိုက်ခိုက်သွားမလားဆိုတာ ဂျပန်ဇာတ်ကားတို့ထုံးစံအတုင်း သဲထိတ်ရင်ဖိုကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်
ဒီဇာတ်ကားကို ဘာသာပြန်ပေးသူကတော့ Myat Eaindray Khaing ဖြစ်ပါတယ်
Daichi Watanabe Jun Kunimura Kodai Asaka Koji Okura Koya Matsudai Mahiro Takasugi Miyuki Matsuda Riho Yoshioka Shuntarô Yanagi Yoshi Sakou
Daichi Watanabe Jun Kunimura Kodai Asaka Koji Okura Koya Matsudai Mahiro Takasugi Miyuki Matsuda Riho Yoshioka Shuntarô Yanagi Tomorowo Taguchi Yoshi Sakou
Option 1 sharer.pw 598 MB SD (480p)
Option2yuudrive.me 598 MB SD (480p)
Option3megaup.net 598 MB SD (480p)
Option4megaup.net 1.4 GB HD (1080p)
Option5sharer.pw 1.4 GB HD (1080p)
Option6yuudrive.me 1.4 GB HD (1080p)
Peppermint (2018) 2018
Project Gutenberg (2018) 2018
Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011) 2011
The Nice Guys (2016) 2016
2 Fast2Furious (2003) 2003
Polar (2019) 2019
Holmes & Watson (2018) 2018
Line Walker (2016) 2016
Talvar (2015) 2015
The Girl in the Spider’s Web (2018) 2018
The Wolf of Wall Street (2013) 2013
Gatao 2: Rise of the King (2018) 2018